Jascha Kaykas-Wolff Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Jascha Kaykas-Wolff
Jascha Kaykas-Wolff waxay aaminsan tahay laba mabda 'oo muhiim ah: Raadi fursado aan cid kale raadineynin; Iyo, weligaa si isku mid ah laba jeer ha u fashilmin. Waa hanaan udub dhexaad u ah dhaqanka suuqgeynta Agile. Ku lifaaqan BA cilmiga cilmu-nafsiga ee Kuliyada Whittier, waa mid sifiican ugu shaqeysay xirfad ahaan iyo shaqsiyan. Maaddaama uu muddo dheer suuq ahaan iyo la-taliye khibrad maamul u lahaa shirkadda Yahoo !, Microsoft, Webtrends, Involver (oo ay heleen Oracle), iyo Mindjet, wuxuu hadda ku hoggaamiyaa suuqgeynta BitTorrent.
Khamiista, Sebtember 18, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jascha Kaykas-Wolff
Laga soo bilaabo dhismayaasha dhismaha ilaa dhismaha software. Sannadihii 1950-meeyadii ayaa Model Water Development Model loo soo saaray naqshadeynta iyo horumarinta barnaamijyada. Nidaamku waa shey ka mid ah warshadaha wax soo saarka halkaas oo, daruuri ahaan, jawaabta saxda ah ay ahayd in la hindiso ka hor intaan shaqada la bilaabin. Iyo, adduunkaas, jawaabta saxda ah ayaa macno samaynaysa! Miyaad qiyaasi kartaa xaalad aad go'aansatay inaad ku dhisto dabaq dhisme si ka duwan kala badh dhismaha? Taasi waxay tidhi, soosaarka ah ee
Jimco, Nofeembar 15, 2013 Jimco, Nofeembar 15, 2013 Jascha Kaykas-Wolff
Wadahadal aan la yeeshay saaxiibkay iyo saaxiibkey Joe Chernov, VP Marketing ee Kinvey waxaan isdhaafsanay su'aalaha ugu badan ee la isweydiiyo ee labadeenaba ka helnay kooxdeena iyo asxaabta warshadaha. Maaddaama uu Joe yahay suuqgeeyaha sannadka maad layaabi doontid inaad ogaato in mid ka mid ah su'aalahiisa la isweydiiyo ay tahay: Sideen ku billaabaa barnaamijka suuqgeynta waxyaabaha guuleysta? Su’aasha labaad ee uu inta badan isweydiiyo waa: